ဖူးနုသစ်: ရောက်တတ်ရာရာ နည်းပညာတွေ
ကျွန်တော် ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ ကမ္ဘာမှာ ဘယ်လို နည်းပညာ အသစ်အဆန်းတွေ ပေါ်နေပြီ ဆိုတာမျိုးတွေကို စိတ်ဝင်စားတတ် ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်ကတော့ အင်္ဂလိပ်စာ မဖတ်တတ်တာရယ် အနီးအနားမှာ ဖတ်စရာ စာအုပ်စာတမ်း မရှိတာတွေရယ်ကြောင့် မြန်မာလို ဖတ်လို့ရတဲ့ သုတစွယ်စုံ သိပ္ပံ မဂ္ဂဇင်း စတာတွေပဲ ဖတ်လေ့ရှိပါတယ်။ ၆ တန်း ရတန်း အရွယ်လောက်က သုတစွယ်စုံထဲမှာ ပါတဲ့ ဂြိုဟ်သား အကြောင်းတွေ ယူအက်ဖ်အို (Unidentified Flying Object) လို့ ခေါ်ကြတဲ့ အမျိုးအမည် မသိပျံသန်းနေတဲ့ အရာဝတ္ထုတွေ အကြောင်းကို စိတ်ဝင်တစားနဲ့ ဖတ်ပြီး အစ်ကိုတစ်ယောက်ကို ပြန်ပြောလေ့ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် ပြောတာတွေ ကြားတဲ့ အစ်ကိုကတော့ မင်းဟာတွေက လွန်လွန်းပြီထင်တယ်။ ဒီလောက် ထူးဆန်းတာတွေ တွေ့မှတော့ နိုင်ငံခြားသတင်းထဲ သတင်းစာထဲ ပါလာလောက်ပြီပေါ့ကွ လို့ ဆင်ဆင်ခြင်ခြင် ပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ နိုင်ငံခြား မဂ္ဂဇင်းထဲက ဘာသာပြန်ထားတာပဲ။ လိမ်တာ မဖြစ်လောက်ပါဘူးလို့ ပြန်ပြောတတ်ပါတယ်။ နောက်တော့ ဟန်သစ် မဂ္ဂဇင်းထဲမှာ သုတစွယ်စုံမှ ဘင်သံများ ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးပါလာပြီး အဲဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်ရတဲ့ အခါမှ သုတစွယ်စုံက နိုင်ငံခြားက အပေါစား အပျော်ဖတ် မဂ္ဂဇင်းတွေထဲက ယုံတမ်းစကား ဆန်ဆန် သတင်းတွေကို ဘာသာပြန်ပြီး ထည့်နေမှန်း သဘောပေါက်ပါတယ်။ ဟန်သစ်က အဲဒီလို နှိပ်ကွပ် ပြီးနောက်ပိုင်းတော့ သုတစွယ်စုံထဲ အဲဒီလို သတင်းမျိုးတွေ ပါမလာတော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သုတစွယ်စုံကနေ ဆယ်လူလာ ဖုန်းအကြောင်းတွေ အီရီဒီယမ် ဂြိုဟ်တုဖုန်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းတွေစတဲ့ နည်းပညာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမှန်အကန် ဗဟုသုတ တချို့တဝက်တော့ ရလိုက်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်း အင်္ဂလိပ်စာကလေး မတောက်တခေါက် ဖတ်တတ်တဲ့ အချိန်ရောက်တော့ ဗြိတိသျှ ကောင်ဆယ်လ်မှာ ရှိတဲ့ နည်းပညာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်တွေ စဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ အလွယ်ဖတ် အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ရေးထားတာကြောင့် နားလည်လွယ် ပါတယ်။ အဲဒီမှာ လေဆာ နဲ့ မေဆာ အကြောင်းတွေ စပြီး သိခဲ့ရပါတယ်။ လေဆာကတော့ လူတိုင်း ကြားဖူးပါတယ်။ LASER ဆိုတာက Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation ကို အတိုကောက် ခေါ်တာပါ။ လျှပ်စစ်သံလိုက် ရေဒီယို သတ္တိကြွ နယ်ပယ်တစ်ခုထဲမှာ အလင်းကို စူးစိုက် လွှတ်ထုတ်ထားတယ် ဆိုတာမျိုး အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်လို့ရပါတယ်။ သိပ္ပံရုပ်ရှင်ကား များထဲမှာတော့ လေဆာသေနတ်တွေကိုင်ပြီး တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပစ်နေကြတာမျိုး တွေ့ရမှာပါ။ အပြင်မှာတော့ အဲဒီလောက် မလွယ်ပါဘူး။ လူတစ်ယောက်ကို လောင်ကျွမ်းနိုင်တဲ့ အားမျိုးရှိတဲ့ လေဆာမျိုးကို ရဖို့ လေဆာပြွန် အကြီးကြီးတစ်ခု လိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ စက်ရုံအလုပ်ရုံတွေမှာ သုံးတဲ့ ကာဘွန်ဒိုင် အောက်ဆိုက်ဒ် ဒါမှမဟုတ် YVO4 လေဆာမျိုးတွေမှာ အားကောင်းတဲ့ ပါဝါဆပ်ပလိုင်း လိုပါတယ်။ အဲဒီထက် ပိုပြီး အားကောင်းတဲ့ YAG လေဆာလို လေဆာ အမျိုးအစားတွေ ဆိုရင် အအေးခံဖို့အတွက် ရေပိုက်ပါ လိုအပ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ထဲကလို ပစ္စတို သာသာလောက် ရှိတဲ့ သေနတ်ဆိုရင်တော့ ပြပွဲတွေမှာ သုံးတဲ့ လေဆာပွိုင်တာလောက် ပြင်းတဲ့ လေဆာမျိုးလောက်ပဲ ရမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲဒါဆိုရင်တော့ လူကို ပြာကျဖို့တော့ ဖြစ်နိုင်မယ် မထင်ပါဘူး။ မျက်စိတည့်တည့် ထိုးရင်တော့ ကြာကြာနေ မျက်စိပျက်တာ မျိုးလောက်တော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ နည်းပညာကတော့ မေဆာပါ။ ဒေးဗစ်ကော့ပါးဖီးရဲ့ မျက်လှည့်ပွဲကို ရုပ်မြင်သံကြားမှာ ကြည့်ဖူးတဲ့သူတွေတော့ ဒေးဗစ်ကော့ပါးဖီး တရုတ်ပြည်က မဟာရံတံတိုင်းကြီးကို ဟိုဖက်ဒီဖက် ဖောက်ပြီး ထွက်ပြတာ တွေ့ဖူးပါလိမ့်မယ်။ သိပ္ပံနည်းကျ စဥ်းစားရင် ဖြစ်နိုင်သလား ဆိုတော့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နံရံတစ်ခုထဲမှာ ရှိတဲ့ ဒြပ်ဝတ္ထုတွေကို သူတို့ရဲ့ သဘာဝကြိမ်နှုန်း (Natural Frequency)အတိုင်း မေဆာနဲ့ တုန်ခါစေရင် နံရံကို သာမန်လူတစ်ယောက်က လေကို ဖြတ်သလို ဖောက်ထွက် သွားလို့ ရနိုင်တယ် လို့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက တွေးကြပါတယ်။ ဒေးဗစ်ကော့ပါးဖီးတော့ မေဆာ သုံးတယ် မထင်ပါဘူး။ သူ့နည်း သူ့ဟန်တော့ ရှိမှာပါ။ MASER ဆိုတာက Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation ရဲ့ အတိုကောက်ပါ။ လေဆာနဲ့ သဘောတရားခြင်း အတူတူပါပဲ။ ဒါပေမယ့် မေဆာမှာတော့ အလင်းအစား မိုက်ခရိုဝေ့ဖ်ကို သုံးပါတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ မိုက်ခရိုဝေ့ဖ် အစား M ကို မော်လီကျူလာအနေနဲ့ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက် ပြောင်းလဲ လိုက်ကြပါတယ်။
သိပ္ပံဝတ္ထုတွေ ဖတ်ရင်း တွေ့လာတဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတဲ့ နည်းပညာတစ်ခုကတော့ Teleporting လို့ခေါ်တဲ့ နည်းပညာပါ။ စိတ်ကူးယဥ်ဆန်ဆန် နည်းပညာတစ်ခုပါပဲ။ အပြင်မှာ လက်တွေ့ဖြစ်လာဖို့တော့ မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။ တယ်လီပို့တင်းကတော့ လူတစ်ယောက်ကို တစ်နေရာမှာ တစ်စစီ ဖြိုခွဲပြီး တယ်လီဖုန်းထဲမှာ အသံလှိုင်းတွေ လွှင့်ထုတ်သလို တခြားနေရာ တစ်ခု ကို လွှင့်ထုတ် အဆုံးသတ်နေရာရောက်မှ အကုန်ပြန်ဆက်ဆိုတဲ့ သဘောတရားမျိုးပါ။ သိပ္ပံဝတ္ထုတွေ ထဲမှာတော့ လူတွေက တစ်နေရာကနေ တယ်လီပို့တင်းလုပ် တခြားဂြိုဟ်တစ်ခု ဒါမှမဟုတ် အာကာသယာဥ်ပေါ်မှာ ပြန်ပေါ်လာတယ် ဆိုတာမျိုး ရေးထားတာ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်သလား ဆိုရင်တော့ မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။ လူတစ်ယောက်ကို တစ်စစီ ဖြိုခွဲနိုင်တယ် ဆိုပါစေဦး အဲဒီဖြိုခွဲထားတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေကို လုံလောက်တဲ့ တိကျမှုနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ဖို့ အလွန်ခက်ခဲ ပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် တခြားနေရာတစ်ခုမှာ တပုံစံတည်းတူတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို တစ်စစီ ပြန်ပြီး ဆက်စပ်ဖို့ ဆိုတာက နည်းပညာ ပိုင်းအရ မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။ နည်းနည်း လွဲသွားရင်တောင် မြွေပွေး အကောင် အကြီးကြီး ကိုက်ပါပြီ။ ပိုပြီး ဆိုးတာက အဲဒီလို လုပ်လို့ရကြေးဆိုရင် ဆက်သွယ်ရေး နည်းပညာမှာ သုံးသလို ကော်ပီတွေ ပွားပြီး လူကို နှစ်ယောက်သုံးယောက် တစ်ပြိုင်တည်း ဖြစ်အောင် ပြန်ထုတ်လို့ ရမလား ဆိုတာကလည်း စဥ်းစားစရာ တစ်ခုပါ။ လူကို ကော်ပီကူးလို့ ရပြီထားပါဦး စိတ်ကို ဘယ်လို အပြောင်းအရွှေ့ လုပ်ကြမလဲ ဆိုတာလည်း နောက်ထပ် စဥ်းစားစရာရှိတဲ့ အချက်တစ်ချက်ပါပဲ။
အီလက်ထရွန်းနစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့လည်း နည်းနည်း ဖတ်မှတ်လိုက်ရတာတွေ ရှိပါတယ်။ လူတစ်ယောက် တစ်ခုခုကို စဥ်းစားရင် သူ့ရဲ့ ဦးနှောက်ထဲကနေ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းတွေ ထွက်လာတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီ လျှပ်စစ်သံလိုက်လှိုင်းတွေရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို ဖွင့်ဆိုနိုင်ရင် လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်အကြံကို သိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလိုသာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုနိုင်ခဲ့ရင် လူတွေမှာ Privacy ဆိုတာ ရှိတော့ မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတွေပိုပြီး ခွင့်လွှတ်တတ်လာကြမလား ထပဲ သတ်ကြမလားတော့ မသိပါဘူး။ လူတွေ အရှိကို အရှိအတိုင်း လက်ခံနိုင်ကြဖို့ လိုလာလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အခုလို အလိမ်တွေ အညာတွေနဲ့ ဟန်ဆောင်မှုတွေ ပျောက်သွားကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ သမီးရည်းစားတွေရဲ့ ကြားက ဆက်ဆံရေးလည်း တစ်မျိုးတစ်ဖုံ ပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ ယဥ်ကျေးမှု ဆိုတာကြီးပဲ တစ်မျိုးတစ်ဖုံ ပြောင်းသွားမလား ဒါမှမဟုတ် ယဥ်ကျေးမှု ဆိုတာကြီးကို မပြောင်းလဲချင်လို့ပဲ အဲဒီလို နည်းပညာမျိုးတွေကို မတိုးတက် မပြန့်ပွားအောင် ဟန့်တားကြမလား ဆိုတာတော့ မပြောတတ်ပါဘူး။
Posted by ZT at 11:54 PM
Labels: နည်းပညာ, ပေါက်တတ်ကရ, အက်ဆေး
LASER က ဘာလို႕ Light Emission by SER ျဖစ္ရတာလဲဟင္..
သူ႕အတိုေကာက္ကို ဥာဏ္မမီလို႕ ေမးၾကည့္တာ..
Simulated Emission by Radiation isaQuantum Mechanical phenomenon. I am sorry. I also have limited knowledge in Quantum Mechanic and I could not explain you well. :)
very well written post, interesting.
Nway Naychi said...
nice post, ko zt!
ႊအကိုေရ ၀ီကီမွာ Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation လုိ႔ေရးထားတယ္ အကိုက Light Emission ျဖစ္ေနတယ္ေရာ... ဖတ္ရတာ ဗဟုသုတရတယ္။ ေနာက္တခါ တီတြင္ရင္ မီွျငမ္းႏုိင္တာေပ့ါ းP
Thanks for correction. It's my mistake. :)